Ruux ka ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya oo lagu qabtay Jowhar - Wargeyska Faafiye
Ruux ka ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya oo lagu qabtay Jowhar
Gudddoomiyaha degmada Jowhar Maxmed Cabdulle Caqiil ayaa sheegay in marna aysan u dul qaadan doonin in gudaha magaladaasi lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya. guddoomiyaha oo maanta oo Khamiis ah warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in ay sii socon doonaan howl gallada lagula dagalamayo shaqsiyaadka ka beec mushtara waxyaabaha maanka dooriya.
Ciidmada booliska iyo kuwa nabad sugida dowladda Federaalka ayuu sheegay guddoomiyaha degmada Jowhar in maanta ay gacanta ku soo dhigeen ruux la sheegay in uu ka ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya. Sheekh Axmed Ibraahim oo ah guddoomiyaha maxkamada racfaanka gobolka Shabeellaha dhexe ayaa cod dheer ku sheegay in ay ka soo hor jeedaan waxyaabaha ay xaaraantinimeysay diinta oo uu ka mid yahay ka ganacsiga maan dooriyaha.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsDab ka dhacay Xerada Qoxootiga ee Xagardheer.Couple Sentenced For Having Sex In Police Car‘He left me dying,’ victim testifies at attempted murder trialZimmerman's lawyers QuitSheekh caan ah oo lagu toogtay Tanzania.